Enweghi ike ibubata .ova n'ime Virtualbox (Ngwọta) | Site na Linux
Enweghi ike ibubata .ova n'ime Virtualbox (Ngwọta)
N’ụbọchị ole na ole gara aga, ewepụtarala m ihe ọ juiceụ juiceụ na ya virtualization iji Virtualbox, ebe ọ bụ na m na-emejuputa ngwa ngwa ngwanrọ na igwe arụmọrụ nke emesịrị wega ya na sava ikpeazụ ma ọ bụ gburugburu mmepe, ihe a nile na ebumnuche nke ịchụ àjà agbanwe agbanwe nke dị mkpa ka webata ya n'ime Virtualbox iji mee ihe ozugbo. Nke a bụ n'ezie echiche nke ndị mmadụ si Linux TurnKeyAna m amata ụzọ a nke kesaa ihe na echere m na ọ dị ka ọfụma.
N'ime ọtụtụ mbubata na mbupụ nke igwe arụmọrụ, enwere m nsogbu na otu n'ime kọmputa ndị ọbịa na ọ bụ ya ekweghị ka mbubata .ova dị na Virtualbox, ihe ichoro n'ihi otu .ova nwere ike ibubata na komputa ozo nwere otu ụdị a. Amabeghị m ebe nsogbu a si, mana ọ bụrụ na m ga - ahụ ụzọ m ga - esi nwee ike iji .ova a na - ekwu n’enweghị nsogbu ọ bụla, usoro ndị a dị mfe ma m ga - ekekọrịta ha n’okpuru.
Ngwọta nye nsogbu nke Enweghị ike mbubata ova faịlụ na Virtualbox
Aghaghị m ịkọwapụta nke ahụ usoro a anaghị ekwe ka ibubata faịlụ Ova rụrụ arụ, yabụ na ọ bụrụ na igbe ozi gị anaghị anabata mbubata n'ihi na faịlụ ahụ ezughi ezu ma ọ bụ na ị nwere nsogbu, otu usoro a agaghị arụ ọrụ Gbaa mbọ hụ na faịlụ gị .ova na-arụ ọrụ nke ọma.
Ọ bụrụ na mgbe ị na-ebubata ngwa ọrụ dị na ngwa ngwa, ị ga-enweta ozi ezighi ezi dị ka nke dị na onyonyo na-esote, usoro ị ga-ekwu ga-edozi nsogbu gị
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ imepe ọnụ na ndekọ aha ebe faịlụ .ova mbụ dị, mgbe ahụ anyị na - eme iwu na - esote ka anyị wepụ .ova na ọnọdụ nke mmasị anyị.
Iwu a weputara faịlụ atọ nke ova nwere: the .vmdk, .ovf na .mf, faịlụ nke masịrị anyị bụ VMDK (.vmdk) (Virtual Machine Disk) nke bụ otu nke nwere ozi diski dị na ngwaọrụ gị.
Ihe ọzọ anyị ga - eme bụ ịga na virtualbox ma mepụta igwe ọhụụ ọhụụ nwere otu nhazi ahụ dị ka nke mbụ, ya bụ, otu ụlọ ọrụ na sistemụ arụmọrụ, na mgbakwunye ịgbakwunye ọnụ ọgụgụ ebule anyị chọrọ iji, n'ikpeazụ anyị ga-ahọrọ iji a dị adị mebere diski diski ma họrọ .vmdk nke anyị webatara na nzọụkwụ gara aga.
N'ikpeazụ, anyị mepụtara igwe arụmọrụ ma anyị nwere ike ịgba gburugburu gburugburu na-enweghị nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Enweghi ike ibubata .ova n'ime Virtualbox (Ngwọta)
Iwu a anaghị eme ihe ọ bụla, ma ọ bụ na amaghị m ma m na-eme ya na-ezighi ezi, ọ na-enyere aka
Kedu ihe kpatara anyị ji ahọrọ akara iwu karịa ndị GUI?